Eli libali le logo kaGoogle | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Amaxesha amaninzi sinokucinga ukuba ilogo iphantse yazalwa njengoko siyazi namhlanje, kodwa ihlala isenzeka ukuba ithathe inkqubo ekuhambeni kwexesha, kwimeko ezininzi, ihlala ibetha kakhulu. Ayizukuba sisihlandlo sokuqala ukuba uguquko kunye neengcinga zeelogo zeempawu ezahlukeneyo zidlule kumaphepha ethu, njengeAdidas, bekuthini iphuculwe ukuze ibe ngaphezulu ukuya kuthi ga ngoku okanye ulunike utshintsho olulungileyo lokuphakamisa ezinye iinjongo ezikufutshane neenkonzo abazibonelelayo.
Uno Omnye wemizekelo ecacileyo yale yimbali yelogo kaGoogle, enye yeengxilimbela zobuchwephesha eziye zanohambo olunomdla kakhulu ngexa lokufunda ezinye zeenguqu ezibaluleke kakhulu kwilogo. Ngesi sizathu, siza kwazi ezona zigaba zibalulekileyo zelogo ethathe ixesha lokuba ibe yile nto iyiyo kwaye ibhalwe kakuhle ezingqondweni zezigidi zabantu kwihlabathi liphela.
1 Ukuqala kwembali yelogo kaGoogle
2 Ngo-1998, unyaka apho iGoogle ithatha umbala ongaphezulu
3 Ngo-1999 ngunyaka wokufiphaza kunye ne-3D
4 1999 kwaye siyaqhubeka nokukhula ukuya kulawulo
5 Ukususela ngo-2010 ukuya ku-2013
6 Imibala ye-Spot ukusuka ngo-2013 ukuya ku-2015
7 Kwaye ngo-2016, uGoogle wangoku
8 Kwaye ayizizo zonke izinto ezihlala apha
Ukuqala kwembali yelogo kaGoogle
Inkampani yaqala thatha iziko lakho kwangoko kwangowe-1997 xa kwavela kwela gama langaphambili labizwa ngokuba yi "BackRub." Kuyo yonke le minyaka, kwiminyaka engamashumi amabini edlulileyo, le nkampani idlule kwi-14 yotshintsho ukufikelela kwi-logo sonke esiyaziyo namhlanje. Ngale nto siyenza icace into yokuba ibingeyontyatyambo yosuku, kodwa ikamva layo belisetyenzwe ixesha elide.
Kwakukho ngo-1997 xa uLarry Page noSergey Brin, iingqondo zokucinga emva kwe-G enkulu, Baye bagqiba kwelokuba banike loo logo ye "BackRub" kwaye uze nombono oza kufaka umbala kwilogo yokuqala kaGoogle.
Le logo yafunyanwa okokuqala kwiiseva zeYunivesithi yaseStanford Kwaye kwaba nethamsanqa lokuhlala unyaka wonke de yafumana ukubanjwa ngo-1998.
Ngo-1998, unyaka apho iGoogle ithatha umbala ongaphezulu
Kwezi leta zingaqhelekanga, zinemibala ebonakala ngathi ithathwe kwitemplate yeFotohop esisiseko, siyayifumana typography iyalelwe kwaye yonke into ithatha ubume I-rectilinear ngakumbi ukuba ivele ilogo egxile ngokupheleleyo.
Utshintsho olutsha izakuhamba neziganeko zenkampani ukuba ibithatha enye indlela kwaye ibonisa loo logo kakuhle, inemibala eyoyikisayo, kodwa eneemilo ezichanekileyo.
Ngo-1999 ngunyaka wokufiphaza kunye ne-3D
UGoogle uyadlula ukukhetha ukufiphaza kunye nefuthe le-3D evumela umbono omncinci wokuvela kwezo ntlobo zelogo yonyaka ophelileyo. Ezi ziphumo zibonelela ngenye imvakalelo kwilogo egqithiselwe kwinjongo yemibala ephambili yevili lemibala. URuth Kedar weza nale mibala kakuhle ukuze abe nenkampani enobumnandi obugcweleyo ezandleni zakhe.
Ngokukodwa, kumagama kaKedare, umbono yayikukubonisa iGoogle ayikhange ilandele imigaqo yabanye, kwaye ke utshintsho kumbala wesibini we «L».
Omnye umahluko ocacileyo kukuba i «G» yatshintsha yaba luhlaza okwesibhakabhaka kwaye ileta kuphela ehlala nohlaza yayingu "l". Umzekelo oqhubekayo unanamhla kwaye ongatshintshanga ukusukela ngaloo nyaka.
1999 kwaye siyaqhubeka nokukhula ukuya kulawulo
Eyona nto inomdla ngalo nyaka kukuba ilogo kaGoogle, kolunye utshintsho olunomdla kakhulu, unikezela umfanekiso uG omkhulu awunika umhlaba xa uqala ukuthatha isikhundla kulawulo olupheleleyo lwehlabathi njengenjini yokukhangela.
Unyaka ekubonwe ngawo iikhonsepthi ezahlukeneyo, phakathi kwazo kukho enye kuzo Umnyama uthatha ukubalasela kwaye izikhamiso zokuqala ziyahlangana phakathi kwabo ngemibala esiyaziyo sonke.
Yothusa ekugqibeleni into enkulu ethathwe nguG Isigqibo sokwenza yonke into ibe lula nge logo ukuba iyafana njengesiqhelo, nangona enemigca engaphezulu yesitayile, ukufotwa ngendlela engcono kunye nemibala eyaziwayo ngabo bonke.
Ngaphakathi Siza kuhlala nale logo kude kube ngu-2010 nanjengophawu lomzuzu obalulekileyo athe inkampani yajamelana nawo ukuba ibe yinjineli yokukhangela ngokugqwesileyo enokutshintsha inxenye yemisebenzi yezigidi zabantu.
Ukususela ngo-2010 ukuya ku-2013
Amakhwenkwe ajonge intaba susa ukufiphaza kwaye ushiye i-logo yakho yesitayela ngemibala soloko, nokuba ukhanyise iithowuni ukuze zibonakale ngcono kolo tshintsho kwiminyaka emithathu
Imibala ye-Spot ukusuka ngo-2013 ukuya ku-2015
Olunye utshintsho kwilogo kaGoogle ukuya phambi komgangatho woyilo lwale minyaka apho imibala yemibala yathatha inqanaba lesicelo kwizicelo ezininzi kunye neenkonzo.
Olu hlengahlengiso lwenziwe kwifonti ngokwayo kwi ukuba iikona zazigudile kunye nokwenza ukuba kube lula ukufunda xa abasebenzisi beqala ukusebenzisa izigidi zee-smartphones kwihlabathi liphela.
Kwaye ngo-2016, uGoogle wangoku
Kunyaka ophelileyo sabona olunye utshintsho olukhulu kunjalo UGoogle uchazwe kwileta enye, u "G". Thatha yonke imibala idityanisiwe kwaye unamathele kumbala webala ukuze usebenze njengophawu lwentengiso.
Utshintsho kwilogo leyo ibonisa ikamva lenkampani ephethe i-SO izixhobo zeselfowuni ezifakwe kakhulu kwiplanethi kwaye etshintsha ubuso beplanethi ngezona zimvo zayo zinomdla ngokubhekisele kufundo olunzulu okanye amandla encoko yendalo ngenxa yomxholo woMncedisi kaGoogle.
Kwaye ayizizo zonke izinto ezihlala apha
IPodemos chola imigaqo ethile kuGoogle kunye nokuvela kwelog yakhookanye. Eyona iphambili kukuba utshintsho oluqhubekekayo esilubonileyo kwindlela emke ngayo kwiinjini yokukhangela iye kwiinkqubo ezahlukeneyo zokusebenza ezilawula izixhobo zeselfowuni ezinje ngee-smartphones namhlanje.
Kucacile kuthi ukuba UGoogle udlale amakhadi akhe kakuhle kwaye utshintsho kwilogo lubonisa olo tshintsho lubalulekileyo. Sikubonile ukwenziwa kweAlfabhethi, olunye utshintsho kwinkampani luye kwezinye iindawo kwaye luya kuba nendima yalo enkulu kule minyaka izayo.
Ngaba uyithandile Imbali yelogo kagoogle? Ucinga ukuba iza kuvela njani kwixesha elizayo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Imbali yelogo kaGoogle